PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - WEPHUKE UMOYA NGOKUNGAHLELEKI KOMCIMBI UBABES
WEPHUKE UMOYA NGOKUNGAHLELEKI KOMCIMBI UBABES
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Izindaba - SANDILE MAKHOBA
UTHWALE kanzima ubabes Wodumo ohambeni lwakhe lokuqala lwaphesheya kwezilwandle lwangesonto eledlule.
Kunezimo ezingezinhle eziholele ekubeni kubhuntshe izinhlelo zokuba anandise kwenye indawo abebhekwe kuyona. Esitatimendeni sakhe asikhiphe ezinkundleni zokuxhumana, uxolise kakhulu kubalandeli bakhe base-united Kingdom (UK) ngokungaphumeleli emcimbini obekumele ayonandisa kuwona.
“Ngithanda ukuxolisa kubalandeli bami base-uk ngokungafiki (emcimbini), kube khona ukuhilizisana phakathi kwami nabahleli bomcimbi. Bengivele ngingekho esimeni esikahle ngoba bengisanda kuthola izindaba zokuthi ugogo wami usesishiyile emhlabeni,” kusho yena ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana.
Abalandeli bakhe bazwelane naye, bemduduza abanye bejabulela ukuthi ugcine efikile kuleliya lizwe. Ngemuva kwaleso sitatimende, ubabes uphinde wakhipha esinye lapho ubekhwela edilika kumlisa ongumhleli wemicimbi, okunguyena omhlelele ukuba ayonandisa kuleliya lizwe, wakhala ngokungahleleki kwakhe. Ubabes usole lo mlisa ngokuba ngumkhohlisi, usebenzisa amagama amaciko ukufeza izinhloso zakhe.
Uveze ukuthi enye yezinkinga edale ukuba angaculi ngomgqibelo odlule wukuthi indawo okwakumele ayocula kuyona ibingakhokheliwe kwaze kwabaphoqa ukuba bahlale ehhotela kwaze kwasa.
“Umoya wami wephukile kanti futhi ngihlukumezeke kakhulu indlela abenze ngayo izinto. Kudala abantu bengixwayisa ngomkhukhwini, kodwa izinto ebezishiwo bengizitshela ukuthi zingamanga. Okubuhlungu wukuthi iqiniso ngilifunde kanzima,” kuchaza yena.
Uveze ukuthi umcimbi wasedublin bekumele uqale ngo-9, kodwa yena uze wakwazi ukufinyelela endaweni yomcimbi ngo-3 entathakusa ngenxa yokungahleleki kwalo mlisa.
“Okungenze ngacula yingoba ngithanda abalandeli bami kanti nabo bese bephuke umoya u... (emgagula ngegama) engasabonwa nangokhalo,” kusho yena.
ILANGA Langesonto alikwazanga ukuxhumana nalo mhleli womcimbi ozinze phesheya.